Injeniera milina lohataona - China Shandong Qingyun Machine
1. araka ny toetra samy hafa ny entana any am-piasana, helical loharano dia azo zaraina ho telo karazana: famatrarana, fihenjanana sy ny torsion. 2. araka ny toetra ara-drafitra, dia azo zaraina ho sokajy roa: cylindrical helical lohataona sy ny savaivony miova helical lohataona. 3. araka ny endriky toetra, dia azo zaraina ho bongo, horonan-taratasy, concave sy convex endriny. 4. amin'ny famokarana sy ny fampiasana, ny lohataona miolakolaka Azo zaraina ho roa karazana: spi lehibe ...
1. araka ny toetra samy hafa ny entana any am-piasana, helical loharano dia azo zaraina ho telo karazana: famatrarana, fihenjanana sy ny torsion.
2. araka ny toetra ara-drafitra, dia azo zaraina ho sokajy roa: cylindrical helical lohataona sy ny savaivony miova helical lohataona.
3. araka ny endriky toetra, dia azo zaraina ho bongo, horonan-taratasy, concave sy convex endriny.
4. amin'ny famokarana sy ny fampiasana, ny lohataona miolakolaka Azo zaraina ho roa karazana: miolakolaka loharano lehibe sy ny kely miolakolaka lohataona araka ny mamorona fomba sy ny savaivony ny fitaovana. Ny teo aloha dia matetika mafana namorona, ary ny farany dia mangatsiaka mamorona.
5. sokajy hafa
Ny karazana miolakolaka lohataona kokoa, ka azo zaraina araka ny ivelany karazana.
Tsotra cylindrical helical lohataona;
Miova savaivony helical lohataona.
Araka ny fitarihan 'ny tsipika miolakolaka, dia azo zaraina ho:
Ny savaivony miova helical loharano dia mizara ho bongo helical loharano, miolakolaka coil loharano, ary concave helical loharano.
Cylindrical helical loharanoko amin'ny rafitra tsotra, mora ny mpanamboatra sy be mpampiasa. Ny mampiavaka famolainany tsipika mahitsy, dia azo ampiasaina ho famatrarana lohataona, miezaka lohataona sy ny torsion lohataona. Raha ny entana dia lehibe sy ny radiala habeny dia voafetra, roa samy hafa savaivony famatrarana loharano azo ampiasaina miaraka mba hanangana mitambatra lohataona.
Previous: Famatrarana Springs - Cylindrical Hot Springs Large Roll famatrarana
Takelaka Bamboo Fibre
Biodegradable Food fitoeran-javatra
Bucket ascenseur Belt
Ceramic manompo lovia
Cheap Wedding Glass Charger Takelaka
Conveyor Belt Fa Fanorenana
Conveyor kamo Belt Conveyor Belt
Dinner Plate fanaovana Machine
Dinner Plate Amin'ny FDA Certificate
fanary Paper Sakafo Trays
voasokitra Dinner Plate
Glass Wedding Charger Takelaka
Taona Gold Blue Charger Plate
Taona Golden Chain Charger Plate
Taona Golden White Charger Plate
Household marbra Nanompo lovia
Industrial Lafaoro Ceramic lovia
Nanompo marbra lovia
Nanompo marbra lovia Supplier
Harena ankibon'ny tany Conveyor Belt For Sale
New Ampitomboy Chain Charger Plate
Levitra Box Key
Nanompo fary lovia
Unique Charger Takela
White Ceramic lovia Fa Restaurant
Z Type Bucket ascenseur